Tababar Ku Saabsan Daryeelka Caruurta Oo Kadhacay Degmada Marsin - Cakaara News
Tababar Ku Saabsan Daryeelka Caruurta Oo Kadhacay Degmada Marsin
Marsin(cakaaranews)Talaado 16ka, May 2017. Tababar ujeedadiisu tahay kobcinta awooda shaqalaha mashruuca daryeelka caruurta ee xaalada degdega ah islamarkaana ay kasooqaybgaeen shaqalaaha mashruuca daryeelka caruurta ee degmooyinka marsin, gaashaamo iyo donod ayaa kabilowday degmada marsin.
Hadaba, tababarkan ayaa waxaa furitaankisii kahadlay Gadh/W G/Socodka Daryeelka Caruurta ee Xafiiska Arrimaha Haweenka iyo Caruurta DDSI Mursal Maxamed Askar oo sheegay in tababarkani uu ayahay mid ay iskakaashadeen xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta DDSI iyo waliba hay’ada UNICEF. Wuxuuna intaa kudaray in Casharada tababarkan lagu bixinayay ay kamid ahaayeen daryeelka caruurta xiliga emergencyga , maaraynta iyo xalinta kiisaska caruurta, tacadiyada kadhanka ah ee loo gaysto jinsiga ama genderka ee loo soogaabiyo GBV, faayo dhawrka iyo nadaafada.
Sidookale, mudane Cumar Axmed Xasan oo kamid ah macalimiinta tababarka bixinaysay ahna khabiir katirsan xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta DDSI oo isna kahadlay tababarkan ayaa sheegay in tabaarkan sidookale kaqaybgalayaasha lagu barayay casharo laxidhiidha wacyigalinta bulshada ee dhinacyada daryeelka caruurta, cidhib tirka gudniinka fircawniga ah iyo guurka degdega ah.
Ugudanbayna shaqaalihii kasooqaybgalay tababarkan ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin tababarkan islamarkaana ay si fiican uga faaiidaysanayaan.